Ukuphucula: Fumanisa, Vimba kunye noMmiselo Cofa ubuqhetseba | Martech Zone
Cofa ubuqhetseba buyaqhubeka buxhaphakile kwishishini lokurhola ngokokucofa. Buyintoni ubuqhetseba? Cofa ubuqhetseba yenzeka xa umntu, iskripthi esizenzekelayo okanye inkqubo yekhompyuter ilingisa umsebenzisi osemthethweni webrawuza ekucofa kwintengiso. Ukucofa ubuqhetseba kwenzeka ukonyusa ngokungafanelekanga ingeniso yendawo yokubamba okanye ukukhupha intlawulo ngokokucofa uhlahlo-lwabiwo mali lomntu okhuphisana naye. Ukucofa ubuqhetseba kuyaqhubeka nokuba ngumxholo wempikiswano kunye nokwanda kwezimangalo ngenxa yenethiwekhi yentengiso engoyena mntu ufumana indlalifa ephambili kubuqhetseba.
Platforms ezifana Ukuphucula une-algorithms yokubona, ibhloko kunye nokuthintela ubuqhetseba bokucofa. Uqikelelo lwamva nje oluvela kwi-Click Forensics kunye ne-Anchor Intelligence luthi i-17-29% yonqakrazo kwiintengiso ezihlawulelweyo zibuqhetseba. Ngelixa uhlawula unqakrazo, ngekhe lubangele ukuguqulwa.
Ukuphucula ukubonelela ngezi zinto zilandelayo
Khangela ubuqhetseba bokucofa njengoko kusenzeka -Ukulandela umkhondo wentengiso yakho ngokuphucula, ikwakhona inkqubo yokubeka iliso kubo bonke umgangatho wentengiso nganye, iiyure ezingama-24 ngosuku. Nokuba kukucofa okungaguqukiyo okungaguquliyo okuvela kumazwe athile, okanye umntu okhuphisana naye ucofa iintengiso zakho, Ukuphucula kunokukufumanisa kwaye kukwazise ngomsebenzi okrokrisayo kwangoko.
Buyisa imali elahlekileyo kwiintengiso zakho zePPC Nanini na xa kufunyanwa ubuqhetseba, kuya kulunga ukwenza ingxelo kunye nazo zonke iinkcukacha ozifunayo ukunika ingxelo ngesiganeko eso kwisiza okanye injini yokukhangela obhengeze kuyo. Iingxelo zobuqhetseba zibandakanya iidilesi ze-IP, iindawo, ii-URL ezibhekisa kuzo kunye nemihla echanekileyo kunye namaxesha okucofa okukrokrisayo.
Vimba kwaye unqande ukucofa ngobuqhetseba -Obakhuphisana nabo kunye namahlakani bacofa iintengiso zakho ukukhupha uhlahlo-lwabiwo mali banokuphulukana noko ukuba bayabanjwa kwaye baxeliwe. Ukuphucula ubazise ukuba uyazi malunga nomsebenzi wabo ngokuthumela ucofa isikrokro kwiphepha lesilumkiso endaweni yewebhusayithi yakho. Sikunika idilesi ye-IP kunye nemiyalelo yokuthintela iintengiso zakho kuGoogle okanye kwiBing ukuba ziboniswe kubo kwixa elizayo.
Ukubhengezwa: Sibonisa amakhonkco onxibelelwano ngaphakathi kwale posi yebhlog. Unokusebenzisa Ukuphucula ngeCandelo.io
tags: cofa ubuqhetsebaukuphuculaHlawula ngokucofa kanyeerbhatubePPCIcandelo.io